Ungagcina njani ulwazi kunye neefayile kwi-Intanethi Windows 10
IMicrosoft Edge, isikhangeli se-Intanethi esiza nayo Windows 10, ibonelela ngeendlela ngeendlela zokugcina ulwazi olunomdla kwiwebhu ukuze uyisebenzise ngokwakho. Apha, ufumanisa ukuba ungayikopa njani into kwi-Intanethi ungene kwikhompyuter yakho, nokuba liphepha lewebhu liphela, umfanekiso omnye, isandi okanye imovie, okanye inkqubo.
Ukugcina iphepha lewebhu
Ngaba ujongile kwitshathi yokuguqula iFahrenheit / iCentigrade? Ngaba ufuna itshathi yeSazisi yeSushi kwisidlo sangokuhlwa? Ngaba ufuna ukugcina uhambo lwenyanga ezayo eNorway? Xa ufumana iphepha lewebhu elinolwazi olungabalulekanga, ngamanye amaxesha awunako ukumelana nokugcina ikopi kwikhompyuter yakho ukuze iphinde ibonwe, kufundwe, okanye kuprintwe kamva.
IMicrosoft Edge ikuvumela ukuba ugcine amaphepha ewebhu ngokongeza kuLuhlu lwakho lokuFunda.
Ukugcina nje kancinci iphepha lephepha lewebhu, khetha isicatshulwa ofuna ukusibamba, ucofe ekunene, kwaye ukhethe uKopa. Vula iprosesa yakho yamagama kwaye uncamathisele isicatshulwa kuxwebhu olutsha kwaye ugcine kwifolda yakho yamaXwebhu ngegama elichazayo.
Njengoko ukhangela kumaphepha ewebhu kwaye ubona umfanekiso olunge kakhulu ukuba ungadlula, ugcine kwikhompyuter yakho: Cofa ekunene umfanekiso kwaye ukhethe Gcina umfanekiso, njengoko kubonisiwe apha.
ipilisi emhlophe e-oblong 176 kwelinye icala
Cofa ekunene umfanekiso onqwenelekayo kwaye ukhethe Gcina umfanekiso kwimenyu ephumayo.
Ukugcina njengefestile kuyavela, kukuvumela ukuba ufake igama elitsha lefayile yomfanekiso, ukuba uyafuna. Cofa ku Gcina ukugcina umfanekiso wakho ojikeleziweyo kwifolda yemifanekiso.
Ukuyekiswa ngesiquphe kwe-lisinopril
Imenyu ezixineneyo ezibonisiweyo kwi Umzobo 9-6 inikezela ngezinye iindlela eziluncedo, ekuvumela ukuba ukhethe ukwabelana (nge-imeyile) umfanekiso okanye ukope kwibhodi eqhotyoshwayo yeWindows ukuze unamathisele kwenye inkqubo.
Uyakhumbula umfanekiso omncinci ngegama lakho kwimenyu yokuqala yeWindows? Zive ukhululekile ukusebenzisa nawuphi na umfanekiso okwi-Intanethi. Cofa ekunene umfanekiso omtsha kwaye ugcine kwifolda yakho yeMifanekiso. Emva koko sebenzisa iapp yoseto ukuguqula loo mfanekiso ube ngumfanekiso weakhawunti yakho entsha.
Ukukhuphela inkqubo, ingoma, okanye olunye uhlobo lwefayile
IMicrosoft Edge yenza kube lula ukukhuphela iifayile kwi-Intanethi. Eyona nto ibhetele, kulula kunanini ngaphambili fumana iifayile emva kokuba uzikhuphele.
Ukukhuphela into kwiwebhusayithi, cofa kwikhonkco kwinto leyo okanye ucofe iqhosha lokuLanda elikufutshane (ukuba likho). IMicrosoft Edge ikhuphela into kwaye iyibeke ngokuzenzekelayo kwifolda yakho yokukhuphela ukuze ifumaneke ngokulula. Ifayile ihlala ifika kwimizuzwana embalwa.
Xa ukhetha iqhosha lokukhuphela, thatha ixesha elongezelelweyo ukuqinisekisa ukuba ucofa iqhosha elililo. Amasayithi amaninzi azama ukukuphazamisa ukukhuphela enye into, nokuba yi-spyware, intsholongwane, okanye enye into enika iwebhusayithi ukuba ihlawule.
Ungayifumana into oyikhupheleyo kwezi ndlela zimbini:
Khuphela ifolda: Izinto ezikhutshelweyo zihamba kwifolda yakho yokukhuphela. Ukuzifumana, vula uMhloli weFayile kwibar yomsebenzi. Xa ivula ifayile yokuKhangela, ubona ifolda yokukhuphela edweliswe kwicala lasekhohlo lenkqubo.
Umgca wokukhuphela weMicrosoft Edge: Cofa kwi icon yeHub (eboniswe apha) kwiMicrosoft Edge. Xa kuvela imenyu yeHub, cofa i icon yokukhuphela. (Yeyona icon-ekunene kwi-Hub menu.) U-Microsoft Edge udwelise zonke iifayile zakho ezikhutshelweyo zonqakrazo olunye lokufikelela. Unokucofa kwimenyu yeFolda evulekileyo yekhonkco ukuya ngqo kwifolda yokukhuphela ekhankanywe kwibhulethi eyandulelayo.
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-pantoprazole
Iifayile ezininzi ezikhutshelweyo ziza zipakishwe kwifolda ecocekileyo eneziphu kuyo, eyaziwa njenge Ifayile yeZip. IiWindows zibaphatha njengeefolda eziqhelekileyo, ke unokuzicofa kabini ukuze ubone ngaphakathi kwazo. (Iifayile zinyanzelisiwe ngaphakathi kwifolda ukugcina ixesha lokukhuphela, ukuba ukhathalele ubunjineli obuchaphazelekayo.) Ukukhupha iikopi zeefayile ezifakwe kwi-zip, cofa ekunene kwifayile evaliweyo kwaye ukhethe Khipha konke.
benadryl kunye ne-claritin kunye
iintlobo zepayipi yamanzi zeplastiki
iziphumo ebezingalindelekanga ze-oseltamivir phosphate
Ngaba i-amlodipine ichame umchamo
amayeza ozwane ngundo
cebisa okanye itylenol yokudumba